သီရိလင်္ကာ Archives - News @ M-Media
Post Tagged with: "သီရိလင်္ကာ"
April 27, 2019 — သူ့အမြင်, ဆောင်းပါးရှင် အာဘော်
အလဲဗင်းနှင့် မြန်မာမီဒီယာများ ကိုလံဘို တယ်လီဂရပ်၏ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ပိတ်ပင်သည့်သတင်းအား ကိုးကားတင်ပြကြသော်လည်း အစွန်းရောက်ဆိုသည့် စကားလုံးကိုမူ ပြည်သူအားချပြရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြ
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၃ M-Media အလဲဗင်းနှင့် မြန်မာမီဒီယာများ ကိုလံဘို တယ်လီဂရပ်၏ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ပိတ်ပင်သည့်သတင်းအား ကိုးကားတင်ပြကြသော်လည်း အစွန်းရောက်ဆိုသည့် စကားလုံးကိုမူ ပြည်သူအားချပြရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြ မြန်မာပြည်၏ နာမည်ကြီးမီဒီယာ ကြီးများသည် မြန်မာနိုင်ငံနည်းတူ[Read More…]
July 1, 2013 — နိုင်ငံတကာသတင်း
သီရိလင်္ကာမွတ်စ်လင်မ်များ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရမှုကို ကုလသမဂ္ဂထံ အသိပေးအကြောင်းကြား
မတ်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၃ M-Media source: OnIslam & Newspapers ကိုင်ရို။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့၏ တိုက်ခိုက်မှု အရှိန်အဟုန်မြင့်လာခြင်းအား စိုးရိမ်လာ သည့်အပေါ် သီရိလင်္ကာမှ မွတ်စ်လင်မ်များသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂသို့[Read More…]
March 9, 2013 — သတင်းဆောင်းပါး, နိုင်ငံတကာသတင်း
သီရိလင်္ကာ အရေးအခင်းမျိုး ပြန်ပေါ်လာပြီလား ?
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ၊ ၂၀၁၃ M-Media www.mmtimes.com မှ Anti-Muslim monks: Sri Lanka redux? ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၃ ၊ ၂၀၁၂ တွင်တင်ပြခဲ့သော Alex Bookbinder[Read More…]
February 23, 2013 — ဘာသာပြန်, ဆောင်းပါး